Hogaamiyaha ISIS ee badalay Al-baqdaadi oo gacanta u galay…
Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee Iraq waxay xilli dambe oo xalay ahayd ku dhawaaqeen in ay gacanta ku dhigeen Ninka ay suurtogalka tahay in uu bedelay Hoggaamiyihii Kooxda Daacish ee geeriyooday, Abu Bakar Al-baqdaadi.
Sirdoonka waxay sheegeen in ay qabteen Cabdul Naasir Qardash oo haatan Madax ka ah Kooxda Daacish-ta Iraq, kaasi oo magaciisa dhabta yahay Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.
Ilo dhanka Ammaanka ayaa sheegay in uu Hoggaamiyaha cusub hoggaaminayey Dagaalkii weynaa ee ka dhacay Deegaanka Baquus ee dalka Syria bishii Feberaayo ee sanadkii hore ee 2019-kii.
Dhinaca kale, Faahfaahin dheeraad ah lagama bixinin xogta qaabkii loo qabtay Cabdul Naasir Qardash, oo isagu la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeeda dadka Turkemenka Iraq ee ku nool Gobalka Telafar oo u dhow magaalladda Mosul ee Waqooyiga Iraq.
Xukumadda Maraykanka waxay Ka hor dilkii Hoggaamiyihii hore ee Daacish, Abu Bakar Albaqdaadi sheegtay inay Al-salbi madaxiisa dul-dhigeen Abaalmarin Lacageed oo dhan 5 malyan oo Dollar.
Al-baqdaadi waxa uu ku geeriyooday Gobalka Idlib ee dalka Syria bishii October ee sanadkii hore, kadib, markii uu isku dhex qarxiyey Hul ama god dhulka hoostiisa oo uu ku dhuumaalaysanayey, xilli ay Ciiddanka Khaaska ee Milliteriga Maraykanka ku dhawaadeen inay nolosha ku qabtaan.